Akụkọ - Atụmanya nke nhicha rọba na imegharị ihe
Atụmanya nke plastik ịsa na imegharị ihe maka ndị ọrụ
N’ọnwa Julaị 2017, Mịnịstrị na-ahụ maka nchekwa gburugburu ebe obibi gbanwere ma depụta ụdị “mbibi nke mba ọzọ” iri abụọ na anọ gụnyere plastik mkpofu na akwụkwọ mkpofu n’ime akwụkwọ amachibidoro mbubata ihe mkpofu siri ike, ma mejuputa mmachibido iwu mbubata na “mbibi nke ndị ọzọ” site na Disemba 31, 2017. Mgbe otu afọ gbaa ụka na ntinye na 2018, mbubata mbubata mkpofu ahihia na China gbadara nke ukwuu, nke butere ntiwapụ nke nsogbu mkpofu na Europe, America, Latin America, Asia na Africa.
N'ihi itinye usoro iwu ndị a, ọdịiche nke ọgwụgwọ mkpofu na mba dị iche iche na-abawanye. Ọtụtụ mba aghaghị iche nsogbu nke ikpofu plastik na ihe mkpofu ndị ọzọ anya n'onwe ha. N'oge gara aga, enwere ike idozi ha ma bubata ha na China, mana ugbu a enwere ike ịgbari ha n'ụlọ.
Ya mere, ọchịchọ maka nhicha plastik na imegharị ihe maka ngwa na mba dị iche iche na-arịwanye elu ngwa ngwa, gụnyere ịkụcha, ihicha, nhazi, granulation na ngwa plastik ndị ọzọ, nke ga-eweta nnukwu oge itolite na oge ntiwapụ. Site na mmụba nke mmachi mkpofu ahịhịa na China na mmelite nke ọgwụgwọ mkpofu ahịhịa na mba dị iche iche, ụlọ ọrụ na-emegharị ihe ga-etolite n'ụdị mgbapụta n'ime afọ ise na-esote. Companylọ ọrụ anyị na-emekwa ka mmepụta na nkwalite nke akụrụngwa dị otú a iji mezuo ebili mmiri nke ụwa ma mee ka usoro ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ saa mbara.
Na njikọta ụwa taa, mba niile nwere njikọ chiri anya. Nsogbu gburugburu ebe obibi nke mba ọ bụla bụkwa nsogbu gburugburu ebe obibi nke mmadụ niile. N’ime ụlọ ọrụ na-emegharị plastik, anyị nwere ibu ọrụ na ọrụ dịịrị anyị iji wusie ụlọ ọrụ mmegharị rọba na nchịkwa gburugburu ebe obibi nke ihe a kpọrọ mmadụ. Na mmepụta nke akụrụngwa anyị, kamakwa maka gburugburu ebe obibi, ka anyị chee ihu n'ọdịnihu mara mma ma dị ọcha.
Achọrọ m ka ndị obodo ọ bụla nwee ebe obibi dị ọcha na ndụ ka mma na nke ka mma maka mmadụ niile. Ahụ ike, enweghị nchekasị.
Post oge: Ọkt-29-2020